यो साता कति शुभ ? हेर्नुहोस् जेठ २९ गते सम्मको साप्ताहिक राशिफल ! – Halkhabar kura
२३ जेष्ठ २०७८, आईतवार ०९:१६
यो साता कति शुभ ? हेर्नुहोस् जेठ २९ गते सम्मको साप्ताहिक राशिफल !
सामान्य शारिरीक आलस्यताले कार्य क्षेत्र प्रभाबित रहने समय रहेकोछ । गरीरहेका कार्यमा सामान्य परीर्वतको योग रहेकोछ । नयाँ कार्य प्रारम्भका निम्ती समय उत्तम रहेकोछ । मान्यजनहरुको स्वास्थमा समस्यादेखा पर्नेछ । आफन्तजनहरु बिचको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । संचित रकम खर्चको सम्भाबना रहेकोले बिषेश ध्यान पूर्याउनु होला । पुराना लगानि उठाउन समयले साथ दिनेछ ।
अहंताको बृद्धिहुनाले आफन्तजनहरु सगँको सम्बन्धमा भने सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । मनोरञ्जनपुर्ण यात्राको योग रह।ेकोछ । पुराना मित्रजनहरु सगँको भेटघाटले मन प्रशन्न रहनेछ । भौतिक श्रोत साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित रहनेछ । मान्यजनहरु सगँको सम्बन्धमा खराबि उत्पन्न हुन सक्नेछ ।
Previous तपाइको यो साता कति शुभ ? हेर्नुहोस् जेठ २२ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल
Next हेर्नुहोस जेष्ठ २४ गते सोमबार जुन ७ तारीखको राशिफल, जय श्रीपशुपतिनाथ !